Banyere Anyị - Tangshan Jidong Mechanical and Electrical Equipment Co., Ltd.
Tangshan Jidong Mechanical na Electrical Equipment Co., Ltd.
Atọ azụmahịa ebe a ：
1.e-commerce ọrụ ikpo okwu
2.Online na ahia ahia
3.Custom ngwọta na ọkachamara na ngwaahịa, mmezi oru na oru ọrụ
4.Share ngwa ngwa n'etiti ụlọ ọrụ ndị otu.
etiti ahụ na-enye ọrụ nyocha maka akụrụngwa iji belata mmejọ mberede na saịtị, ma bulie akụrụngwa na-agba ọsọ kwụsie ike.
Businesseslọ ọrụ asatọ ahụ dị n'okpuru:
Ndị ọrụ aka ọrụ aka ：
Nhazi usoro 1 maka sistemụ mmepụta
Nyocha 4.oil na nyocha
8. ike na static ule nke rotary n'ekwú ọkụ.
Ndị nyocha asambodo atọ nke mba atọ
2.Three Ⅱgrade NDT injinia
3.32 eletriki, igwe, usoro, ike ike na ndị injinia obodo
4.The re-re-Manufacturer center - Idozi dịgasị nke mobile akụrụngwa na ikuku compressors.
5. Nlekọta, Nchekwa, Ọzụzụ.
6.Engineering technical alo center- Inye iwu bidding azụmahịa, nye mbupụ nchekwa data na ọkachamara oru alo
ise isi oru ngo
1.Kiln cylinder radiant okpomọkụ itinye n'ọrụ oru ngo
Anyị ụlọ ọrụ lekwasịrị anya ahịa nnyocha na dechara imewe nke mkpoko nke rotary n'ekwú ọkụ si radiant okpomọkụ inye ọkụ eletrik, bath mmiri kpo oku na kpo oku ke ini etuep. Anyị nwere ike ịme nyocha saịtị na imewe dịka ihe ndị ahịa chọrọ si enye ndị ahịa ndị ahịa na ndị ọzọ.
Karịsịa na akụkụ nke ike ọgbọ ， companylọ ọrụ anyị na-eji teknụzụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ. Nkà na ụzụ a na-eji ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ dị ala nke na-agbapụta site na ebe a na-etinye ọkụ na ọkụ ọkụ iji mepụta ọkụ eletrik. Enweghị mmanụ ọkụ na mmetọ ọ bụla n'oge ọgbọ eletrik. Ọ bụ teknụzụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nwere nnukwu uru akụ na ụba, dị ọcha ma na-acha akwụkwọ ndụ, nke na-akwado usoro nchekwa na nchekwa nchekwa nke gọọmentị. Ọ nwere nnukwu oghere na atụmanya.
Ihe oru ngo bu:
1, The mmiri mma unit na-eji flash evaporation technology, na ike nwere elu ojiji nke n'efu okpomọkụ ka budata na-akwalite uru akụ na ụba nke generator set.
2, The AQC ji esi mmiri ọkụ bụ vetikal ụdị. A na-akwado ya tupu ndọtị ya (imezi ụlọ) tupu igwe ọkụ ahụ iji belata uzuzu na-abanye na mmiri ọkụ ahụ.
3, PH ji esi mmiri ọkụ bụ kehoraizin ụdị, n'ịkpa na-amanye mgbasa uzuoku n'akpa uwe ji esi mmiri ọkụ; Otu uru bụ belata ájá deposition nke kpo oku ebe na ndị ọzọ na uru bụ iji belata ọnụ ọgụgụ nke rapping ngwa, na iji belata ikuku leakage nke usoro.
4, The ekesa akara usoro adopts na ngwaike na usoro software nke mba ma ama ụlọ ọrụ. Ọ dị elu ma nwee ntụkwasị obi.
2.Intilistic lọjistik usoro oru ngo - na-eji onu ogugu akara na smart kaadị technology ka mma nnukwu mbukota nnyefe arụmọrụ ma belata njehie mmadụ.
3.Kiln na oku sistemụ ọkụ - na-eji ntanetị ntanetị, njirimara ihe atụ na teknụzụ ihe mmetụta dị nro, usoro ihe atụ amụma njikwa iji dochie ọrụ arụ ọrụ, chọpụta njikwa na-akpaghị aka ma ruo ihe mgbaru ọsọ nke ịdị mma, ọnụ ọgụgụ siri ike, nchekwa ọkụ, nchekwa ọkụ na Mmepụta ike rụọ ọrụ na otu ebe n'ekwú ọkụ ọrụ ala.
4.Energy management system project- nakọtara, nyocha, nyochaa na jikwaa ike usoro data site na ịhazi usoro njikwa ike iji nweta nchekwa nchekwa na ebumnuche mbibi.
5.Machines dochie ndị nọ n'ọkwá dị elu-were osisi nwere ọgụgụ isi dị ka ihe mgbaru ọsọ nghazi, jiri ígwè ọrụ na-arụ ọrụ dị elu. Ugbua oru 5 R&D ka akwadoro ka enyocha.
Ep Gbanwee akwụkwọ ntuziaka na ụdị akpa robot
Ep Gbanwee ihe ntinye akpa akpa na akpaka akpaka
“Onye snow” na-ehicha rọbọt maka igwe oyi
Ep Dochie ọrụ ịwa ahụ na nhicha mgbochi na ikpocha akpụkpọ anụ
⑤ Gbanwee nhicha ụlọ nkwakọba ihe na nhicha robot
Ngwa na mapụtara Parts
Vetikal na nkume igwe nri (raw vetikal na nkume igwe nri, ciment vetikal na nkume igwe nri, slag vetikal na nkume igwe nri), rotary n'ekwú ọkụ, elu arụmọrụ grate oyi na ala pịa wdg ndị mepụtakwara site ụlọ ọrụ na-ere otu nwere ike izute ina 2500-10000tpd maka ọhụrụ akọrọ usoro ciment mmepụta edoghi .
Kwadoro na Germany Siemens Company na Zhejiang Central Control Co., Ltd, ụlọ ọrụ ahụ mepụtara ma mepụta ụlọ ọrụ teknụzụ na-achịkwa akpaka njikwa usoro, ọkachamara nchoputa usoro maka rotary n'ekwú ọkụ, OTS simulating usoro ọzụzụ na-ewu ụlọ ike ịzọpụta usoro.
The ụlọ ọrụ jiri jiri elu larịị nke dị igwe na-emepụta na-eyi na-eguzogide ọgwụ, okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ na corrosion na-eguzogide ọgwụ oge ọgbụgba, nke nwere ike izute ina nke 2500-10000tpd maka ọhụrụ akọrọ usoro ciment mmepụta edoghi.
Na CN Gpower Gearbox Co., Ltd na NGC rụkọrọ ọrụ, ụlọ ọrụ ahụ guzobere ụlọ ọrụ nlekọta gearbox iji nye ndị ọkachamara ọrụ nrụzi ihe ndozi maka ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ.
“Win-win” bu ebum n’uche ndi otu anyi JIDONG. Anyị ji obi anyị niile na-atụ anya nkwado gị!